धनगढी-गर्मी हुने क्षेत्रमा देखिँदै आएको डेंगु पहाडी जिल्लाहरुमा समेत देखिन थालेको छ । यसवर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार पहाडी जिल्लाहरु डोटी, दार्चुला, अछाम र बैतडीमा समेत डेंगु देखिएको छ ।
पछिल्लो दुई सातादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ जिल्लामा देखिएको डेंगुबाट डोटीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छ जिल्लाका २८ जना डेंगुको संक्रमणबाट बिरामी भई अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार धनगढीमा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बुधबारसम्म कैलालीमा १५, कञ्चनपुरमा चार, डोटीमा एक, दार्चुलामा छ, अछाममा एक र बैतडीमा एक जनाले डेंगुको संक्रमणबाट अस्पताल भर्ना हुनुपरेको छ ।
डोटीमा डेंगुको संक्रमण भएकी दीपायल सिलगढी–६, थाप्लाकी ४२ वर्षी छत्रकुमारी मलासीको उपचारकै क्रममा भदौ ५ गते डोटी जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको छ भने बैतडीमा डेंगुको संक्रमण भएका एक जनाको उपचार भइरहेको छ । बाँकी सबै बिरामीलाई उपचारपछि फर्काइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवरले बताए ।
एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगुबाट बच्नका लागि घर वरपर र सार्वजनिक स्थलमा सफा पानी जम्न नदिनुपर्ने सेती अस्पतालका फिजिसियन डा. शेरबहादुर कमरले बताए ।
डेंगुको जोखिम सामान्यत कात्तिक–मङ्सिरसम्म रहने गरेपनि पछिल्ला वर्षमा साउनबाट डेंगुको प्रकोप बढ्न थालेको डा. कमरले बताए । उनले डेंगुको संक्रमण भएमा कडा खालको ज्वरो आउने, आँखाका गेडा झर्ला जस्तो गरी दुख्ने, हातखुट्टा र ढाड पनि दुख्ने लगायतको लक्षण देखापर्ने गरेको बताए । उनले यस्तो लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराउन सल्लाह दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान चलाएको बताए । उनले सफा पानी जम्ने खाल्डो, टायर लगायतका ठाउँ नष्ट गर्न प्रदेशका सबै निकाय र नागरिक लाग्नुपर्ने सुझाए । उनले डेंगु नियन्त्रण गर्ने र यसलाई निर्मूल पार्ने अभियानमा लाग्न सबैलाई आव्हान गरे ।